Sony dia hitondra Sal iray sy PS2 lalao ho an'ny PS4 - News Fitsipika
Sony dia hitondra Sal iray sy PS2 lalao ho an'ny PS4
Tsy toy ny Playstation 3 (PS3) alain-tahaka, izay ho nampiantrano lavitra ny toetra vaovao online Playstation fanompoana, Lalao fa ny teo aloha ao Sony Nampahery ny Playstation kanônan'ny ho adika eto an-toerana iray alain-tahaka maotera.
Araka ny Eurogamer, ny emulators dia tsy mahazatra ihany no miteraka lalao ny lasa, fa koa upscale azy ireo amin'ny fomba izay tsy hitondra ho azy ireo lasa manjavozavo mikorontana toy ny tamin'ny lasa. Ny foto-kevitra ho an'ny “HD remaster” ny lalitra dia ho tsara tarehy kokoa ny mpampiasa noho ny rahona ny fanompoana izay nampiasaina hanohanana PS3 lalao.
Misy mihevitra fa ho tonga anaram-boninahitra ho amin'ny Playstation Network ara-potoana, ary maro ny endri-javatra dia replicated amin'ny Playstation Ankehitriny. Na izany aza, noho ny ambany lamba fanakonana famaritana ny zokiolona lalao, izany no zava-dehibe kokoa ny mampiasa ny fitomboan'ny herin'ny PS4 ny vaovao farany ny lalao any amin'ny antoniny.
Izany dia mitarika ho amin'ny fanontaniana, Sony raha manao izany ho an'ny taranaka zokiolona hampionona lalao, Nahoana no dia nanao ny rahona fanompoana ho an'ny PS3 anaram-boninahitra? Toa ny valiny vola, toy izany fahafahana ho an'ny mpankafy herim-panahy izay Sony extolls amin'ny ankehitriny PS4 barotra fanentanana mba handoavana ny lalao eo amin'ny PS3 malaza manerana indray.
Araka ny efa mihena Moodys bola Sony ny sata ny loto, ny Japoney teknolojia goavana dia ny fitadiavana fomba hafa hanararaotra ny hatsaram-panahy feno fanbase ny ny PS3 Lalao Nampahery. Mandritra izany fotoana izany, antontan-tsy misy ilàna azy PS3 Optical Discs fako fitiavana fivarotana ao amin'ny UK. M
Ity lahatsoratra ity, Sony dia hitondra Sal iray sy PS2 lalao ho an'ny PS4, ny mpilaza vaovao avy amin'ny The manontany ary nandefa eto nahazoana alalana.
27715	2 Lisitry ny PlayStation 3 lalao, PlayStation, Playstation Network, Sony
← Teen Ringleader Meloka nivaro-tena Ring 25 Manontany tena Foods Mba hampitombo ny Metabolism →